Mootummaan Wayyaanee/EPRDF Mootummaa Uummataa Miti! -
Mootummaan Wayyaanee/EPRDF Mootummaa Uummataa Miti!
By fmegersa | March 30, 2018
Filatamuun Dr. Abiyyi Ahimadis Gaafii Oromoo Dhiigni Sabboontota Meeqaa Itti Dhangalahaa Tureef Deebii Hin Ta’u!
Baarentuu Gadaa, Bitootessa 30, 2018
Weerartoonni, koloneeffattoonni, abbootin irree fi saamtoonni yeroo baayyee akka mootummaa uummataan jaalatamanii fi filatamaniitti of dhiheessu. Afaan qawween of tiksaa jaalalaa fi filannoo uummataatin aangorra jirra jedhu. Saamaa, hidhaa fi ajjeesaa waayee nageenyaa fi guddina odeessu. Wayyaaneen har’a impaayeera itiyoophiyaa bitaa jirtus kanuma jechaa turte, jirtis.
Akka seenaa biyyoota cunqursaa jala turan hedduurraa hubannutti abbootiin irree akka Wayyaanee yoo irree uummataatiin haleelaman malee tolaan aangoo uummataaf gadi hin dhiisan. Tolaan, nagahaan, mariin aangoo gadi dhiisuun, rakkoo furuun isaaniif du’a. Gadi aantummaa dha. Sodaadha, wallaalumaadha jedhanii fudhatu. Qawwee malee bakkaa socho’uu hin barbaadan. Amma guyyaa qawween dhiibamaniitti ni dhaadatu. Goonni, beekaan, numalee hin jirus jedhu. Kan mirga isaas ta’e kan uummata isaa gaafte hunda hidhuun, dararuun, ajjeesuun aadaa isaaniiti. Wayaaneen har’a qabsoo, FXG uummata Oromootiin guyyaan itti dukkanaawaa jirus kanuma raawwachaa turte.
Uummanni Oromoo addatti dhaabni bilisummaa isaaf qabsaawu ABOn guyyaa Wayyaanee amma lafti itti dhiphatte tanaan shiraan dhiibamee mootummaa cehumsaa keessaa bahurraa kaasee “lakkii daandiin kun daandii sirrii miti, lakkii karaan karaa furmaata waaraa impaayeera itiyoophiyaaf fiduu miti, karaa sirrii fi seera qabeessa ta’een deemutu fala” jechaa ture. ABOn yeroo chaartaraarraa kaasee ‘fedhii keenya osoo hin taane fedhii uummataa haa dursinu, uummata qabsaawaafi jirru haa dhageenyu,uummataaf hiree haa kenninu, uummanni mirrga isaa , jireenya isaa irratti haa murteessu, murtii haa kennus” jechaa ture. Wayyaanee shiftaan, murni sobduun maqaa uummata Tigraayiin daldaltu garuu seeraaf abbomamaa hin turre, qawwee harkaa qabdutti amantee yaada ABO, gaafii ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhagahuu hin dandeenye ykn hin feene. Afaaniin maqaa sabootaatiin kakachaa qabatamaan garuu mirga sabootaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu uuggurte. Maqaa sabootaatiin dantaa mataa ishii guttachaas turte. Caasaa hidhaa fi ajjeechaa diriirsitee uummattoota biyyattii addatti ammoo uummata Oromoo samaa fi saamsisaa turte.
Impaayeera itiyoophiyaa keessatti kan biraa haa hafuutii uummata Tigraay kan anatu bilisa baase jettee maqaa isaatin kakachaa yoona geecheefillee wayyaaneen deebii siyaasaa fi haawaasummaa deebifte hin qabdu. Oromoo fi saboonni biyyattii kanneen hafan ammoo walumaa galatti waan hundumarraawuu qophxeeffamanii rakkoo siyaasaa, diinagdee fi haawaasummaa guddaaf saaxilamaa turan, jirusi.
Uummanni Oromoo, dhaabni isaa ABOn kan qabsoo gaggeessaa turanii fi jiran abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsufi, Oromoon biyya isaa irratti akka murteessuu danda’uufi, hiree isaa akka ofii dhugoonfatuuf malee akka wayyaaneen aangoo fakkeessii garaaf bultootaa fi ergamtootaf maqaa Oromootiin kenniteefi bara bittaa ishii dheereffattuufi miti. Akka saamichii fi ajjeechaan itti fufuufi miti. Gaafiin Oromoo gaafii haqaati, gaafii mirga abbaa biyyummaa, gaafii walqixxummaati. Gaafiin kun ammoo hin dhugoomne. Ykn hin deebine, wayyaanee jalattis hin deebi’u! Uummanni Oromoo biyya isaa irratti akka lammii lammaa fi sanaa gadiitti jiraacha ture, jirasi. Biyya isaatti, qabeenya isaatti hin ajaju. Kan biyya isaatti ajaju, Amma wayyaaneen gutummatti hundeen buqqatuttis kun hin jijjiramu! kan qabeenya isaatti ajaju, saamu Wayyaanee fi ergamtuu ishii OPDO dha.
Akkuma beekamu Waggoota 27n darbaniif Wayyaaneen waliin dhooftee aangoo humnaan qabaterra turtee jirti. Kan mirga isaafis ta’e, lammii saaf dubbate, hidhaa fi dararaa, ajjeesaa fi biyyaa baqachiisaa turte. Saamichas amma barbaadde daangaa malee raawwachaa turte. Waggoota 3n darbanii as addatti ammoo bara kana keessa garuu qabsoon, FXG uummanni Oromoo/ ilmaan isaa qeerroon gaggeessan wayyaaneetti daandii cufaa jira, bara bittaa ishii gabaabsaa jira.
Qabsoo gaggeeffamaa jiru/ FXG Oromiyaa keessatti finiinaa jiru har’a Oromoofi miti saboota cunqurfamoo impaayeera itiyoophiyaa keessa jiran kan biraafuu abdii ta’ee jira. Karaa saaqee itti argisiisee jira. Fakkeenyaa fi abdii guddaa ta’eefii jira. Har’a namni qawwee sirnichaa, hidhaa fi ajjeechaa sirnichaa sodaatee qabsoorraa seesu hin jiru.
Hunduu Waraana Wayyaanee dura dhaabbatee qabsoo hadhooftuu, FXG walirraa hin cinne gaggeessaa jira. Qabsoo gaggeessaa jiruunis sirnicha raasaa jira. Sirni shiftaan, saamaa fi ajjeesaan TPLF/EPRDF ofiin jedhu kun labsii yeroo muddamaa baasee goolii uumuun qabsaawoota hidhee ajjeesee kaan sodaachisee qabsoorraa dhaabuuf yaalus hin milkoofnee fi. Akka yaade hin taane, qabsoon itti fufee jira. Qabsoon kun sirnichas dhiphuu hamaaa keess agalchee jira. Qabsoon Oromoo Eenyummaa sirnichaa, faashistummaa itti turee fi jiru ifa baasee saaxileerasi. Waluma agalatti qabsoon Oromoo,FXG gutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru Murna gabroonfattuu, murna abbaa irree fi faashitsii Wayyaanee jedhamtu tana guyyaa itti gabaabsee jira.
Carraaqqiin amma wayyaaneen itti jirtu carraaqqii isa dhumaati, carraaqqii erga miilla lama raaree lixee booda gaggeessaa jirtuudha. Amma asiif achi utaaluun, waraan bobbaasanii nama fixuun, OPDO keessaa kunoo Abiiyyiin ministeera muummee goone jettee hololuun faayidaa hin qabu. Gaafiin Oromoo gaafii OPDO keessaa nama abalu jedhamu naaf muudaa jedhuu waan hin taaneef. Gaafiin Oromoo sirni gabroonfataan wayyaanee/EPRDF jedhamu narraa haa ka’u mirgi abbaa biyyummaakoo haa kabajamu kan jedhuudha. Amma kun dhugoomutti ammaa qabsoon itti fufa malee hin dhaabbatu.
Oromoo dhiiga ilmaan isaatin, qabsaawoota lubbuu isaanii lammiif dabarssanii kennaniin injifannoorratti injifannoo galmeessisaa har’a gaheera, ammaan achis qabsoo isaa cimsee itti fufe gaafii mirga abbaa biyyumma isaa dhungoonfata malee akka wayyaaneen yaaddee OPDO of-fundura qabdee hololtu kana gaafiin koo deebi’e jedhee qabsoo isaarraa hin dagamu. Dagamuus hin qabu.
Eeyyee Oromoon alaa manatti caalaatti harka walqabatee qabsoo eegale, FXG finiinsee itti fufuudhaan Wayyaaneetti xumura gochuu qaba. Holola, hidhaa , dararaa fi ajjeechaa gaggeeffamaa jiruuf gurra qabaachuu hin qabu. Mootummaan Wayyaanee /ERDF Mootummaa uummataa Miti! Muudamuun Dr, Abiyyi Ahimadis ergamaa tokko kaasanii ergamaa biraa kaa’uu malee kan gaafii Oromoo dhiigni meeqa itti dhangalahaa tureef deebii kennuu miti!
← SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 30, 2018 On the Election of Dr. Abiy Ahmed as EPRDF Chairman →